Midowga Afrika oo sheegay weerarkii Halgan inuu xoojinayo go’aankooda ku aadan la dagaalanka Al Shabaab | Baydhabo Online
Midowga Afrika oo sheegay weerarkii Halgan inuu xoojinayo go’aankooda ku aadan la dagaalanka Al Shabaab
Ururka Midowga Afrika, ayaa sheegay weerarkii Khamiistii lagu qaaday Saldhiga Ciidanka Amisom ee ku yaala Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan, in uu xoojinayo go’aanka Midowga Afrika ee uu kula dagaalamayo Ururka Al Shabaab.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika, haweeneyda lagu magacaabo Nkosazana Dlamini-Zuma oo soo saartay qoraal ay kaga hadleyso weerarkan, ayaa marka hore si kulul u cambaareysay weerarkaasi.
Weerarkan, ayaa waxay ku sheegtay mid muujinaya dabciga liita ee Shabaab, iyadoona yoolkooda ku sheegtay faafinta argagaxa iyo sidii ay ku wiiqi lahaayen xasiloonida dalka Somaliya.
“Weerarada kan oo kale ah waxay muujinayan dabciga liita ee Al Shabaab, oo hadafkeeda uu yahay faafinta argagax iyo sii wadista dadaalkeeda ay ku doonayso inay wiiqdo xasiloonida Somaliya.” Ayay yiri haweeneydan.
Waxay kaloo tiri “Waxay tani sii adkaynaysaa go’aankeena ah inaan sii wadno dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab, tan iyo inta Somaliya laga xoreynayo dhammaan canaasiirta argagaxisada.”
Waxay intaa ku dartay “Weerarkan fashilmay wuxuu cadayn u yahay awoodda ay Amisom u leedahay inay si saamayn leh uga jawaabi karto halista argagaxiso.”
Nkosazana Dlamini-Zuma, ayaa waxay tacsi u dirtay qoysaska Ciidanka Amisom ee dagaalka lagu dilay iyo kuwa kale ee lagu dhaawacay, isla-markaana ay la xanuunsanayan qoysaskaasi.
“Waxan tacsi u direynaa qoysaska askartii dhimatay iyo kuwa kale ee dhaawacmay, waana la xanuunsaneynaa qoysaska.” Ayay tiri Nkosazana Dlamini-Zuma, waxayna ku celisay in Midowga Afrika uu sii wadi doono dagaalka lagula jiro Shabaabka.